‘नो’ भन्दाभन्दै कसरी कोकिनको कुलतमा फसे म्याराडोना ? | Ratopati
‘नो’ भन्दाभन्दै कसरी कोकिनको कुलतमा फसे म्याराडोना ?
personअन्वेषण अधिकारी exploreकाठमाडौं access_timeमंसिर ११, २०७७ chat_bubble_outline0
सन् १९८२ मा अर्जेन्टिनाबाट भर्खरै युरोप छिरेका एक युवा ड्रग्सविरुद्ध जनचेतना फैलाउँदै थिए । ‘यदि कसैले तपाईंलाई ड्रग्सको प्रस्ताव गर्‍यो भने ‘नो’ भन्नुहोस्,’ प्रवर्द्धनात्मक भिडियोमा उनले भनेका छन् । दुुग्भार्य, यस्तो सन्देश दिने युवा अर्थात डिएगो म्याराडोनालाई ‘नो’ भन्दाभन्दै नजानिदो पाराले जीवनभर ड्रग्सको छायाले पिछा गरिरह्यो ।
अर्जेन्टिनाको भिल्ला फियोरिटास्थित झुुपडबस्तीमा डिएगो म्याराडोनाको बाल्यकाल बितेको थियो । कारखानामा मजदूरी गर्ने डन डिएगोका आठ सन्तानमध्ये उनी पाँचौ थिए, दुुई छाक टार्न बाबुुले गरेको अथक संघर्ष देखेका म्याराडोना गरिबीबाट मुक्ति चाहन्थे । साँघुरो कोठामा कोचिएर सुुत्दा उनी सुविधासम्पन्न घरको सपना देख्थे ।
म्याराडोनाको छाप्रोसँगै जोडिएको छाप्रोमा बस्थ्यो, गोयो कार्रिजोको परिवार । म्याराडोनाभन्दा गोयो ९ दिनले कान्छा हुन् । बाल्यकालमा यी दुुबै धुलाम्ये मैदानका हिरो थिए । यही क्रममा अर्जेन्टिनोज जुनियर्सको युु–१० टोलीले गोयोलाई बोलायो । उनले तत्कालै प्रशिक्षक फ्रान्सिस्को कोर्नेजोलाई प्रभावित गरे । अनि केही समयपछि सोधे,‘मेरो साथी मभन्दा राम्रो खेल्छ, उसलाई ल्याउँ ?’ प्रशिक्षक सहमत भए । त्यसपछि दुुबैले एकसाथ युवा टोलीबाट खेल्न थाले, उनीहरुले खेलेका विरलैमात्र खेलमा क्लब पराजित भयो ।
म्याराडोनाले १५ र गोयोले १६ वर्षको उमेरमा अर्जेन्टिनी लिगमा डेब्यू गरे, म्याराडोनाको परिवारलाई क्लबले नै अपार्टमेन्ट उपलब्ध गरायो । प्रशिक्षक कोर्नेजोले आफ्नो आत्मकथामा लेखेका छन्, ‘गोयो र म्याराडोनाको राम्रो तालमेल थियो । उनीहरुले मिलेर गोल गथ्र्ये, अनि खुसीले मैदानमै नाच्थे । म्याराडोनासँग कसैले यति राम्रो खेलेको मैले अहिलेसम्म देखेको छैन ।’
तर, एकदिन अचानक गोयोको खुट्टामा चोट लाग्यो, त्यसपछि उनले कहिल्यै पहिलेजस्तो खेल्न सकेनन् । यता, म्याराडोनाको पाइला रफ्तारमा अघि बढ्यो । १९७९ मा जापानमा सम्पन्न युवा विश्वकप जितेपछि उनी ठूला क्लबहरुको नजरमा परे । सन् १९८१ मा बोका जूनियर्सले उनलाई भित्र्यायो, अर्को वर्ष म्याराडोनाले राष्ट्रिय च्याम्पियनसिप जिते, अनि युरोपेली क्लबहरुले उनीमाथि आँखा लगाए ।
१९८२ मा २१ वर्षीय म्याराडोनालाई बार्सिलोनाले विश्व कीर्तिमानी मूल्यमा किन्यो । तर, त्यहाँ विपक्षी खेलाडीले बारम्बार निशाना बनाउँदा पटक–पटक घाइते भए । नतिजा, अपेक्षा गरिएजस्तोे खेल देखाउन सकेनन् । त्यसैले १९८४ मा बार्सिलोनाले महंगो मूल्य लिएर उनलाई इटलीको नापोली क्लबमा बेच्यो । म्याराडोना पहिलोपटक नापोलीको सान पाओलो रंगशालामा सार्वजनिक हुँदा उनलाई झन्डै ८० हजार दर्शकले स्वागत गरेका थिए । इटलीका ठूला क्लब एसी मिलान, युभेन्टस् र इन्टर मिलानको प्रभूत्व तोड्ने नापोलीको लक्ष्य थियो । असम्भव नभएपनि यो अति कठिन चुुनौती अवश्य थियो ।
१९८६ को विश्वकप
१९८६ मा मेक्सिको विश्वकपमा म्याराडोनाले अर्जेन्टिनाको कप्तानी गरे । म्याराडोनालाई विश्वको ठूलो सेलिब्रेटी बनाउने प्रतियोगिता यही हो । अर्जेन्टिना र इङल्यान्डविरुद्धको खेल यो विश्वकपको प्रमुख आर्कषण थियो, किनकी फकल्यान्ड युद्धमा सैनिकहरु आमने–सामने भएको ४ वर्षपछि खेलाडीहरु मैदानमा भिड्दै थिए ।
जहाँ म्याराडोनालाई भगवान मानिन्छ
त्यसदिन धेरै पत्रिकाले यो खेलबारे हेडलाइनमा लेखेका थिए,‘यो युद्ध हो ।’ अर्जेन्टिनाबाट निस्कने पत्रिकाले लेखेको थियो,‘फकल्यान्ड युद्ध सकिएको छैन ।’
म्याराडोनाले खेलको ५१ औँ मिनेटमा बललाई हातले गोलपोस्ट भित्र छिराए । रेफ्रीले यो दृश्य देखेनन् र उनको गोलले मान्यता पायो । यो गोल ‘ह्यान्ड अफ गड’ नामले विश्व चर्चित छ । यसको चार मिनेटपछि म्याराडोनाले ६ जना इंलिस खेलाडलाई छलाएर अर्को गोल गरे, यसलाई विश्वकप इतिहासको अहिलेसम्मकै सर्वाधिक सुुन्दर गोल भनिन्छ । उक्त खेलमा इङ्ल्यान्डका गोलकिपर रहेका पिटर सिल्टन भन्छन्,‘ मानिसहरुमा रमाइलोका लागि खेल्दा पनि यस्तो गोल हान्ने चाह हुन्छ । तर, म्याराडोनाले देशका लागि विश्वकपमा यस्तो गोल गरे, उनी महान् छन् ।’
यसपछि सेमिफाइनलमा बेल्जियमविरुद्ध अर्जेन्टिना २–० ले विजयी भयो, दुुबै गोल म्याराडोनाले गरेका थिए । फाइनलमा म्याराडोनाकै उत्कृष्ट प्रदर्शनमा जर्मनीलाई हराएर अर्जेन्टिनाले उपाधि जित्यो । म्याराडोना विश्वकपकै उत्कृष्ट खेलाडी घोषित भए । प्रतियोगितामा अर्जेन्टिनाले गरेका कुल ८ गोलमध्ये ५ गोल उनको थियो । बाँकी तीन गोलमा पनि उनको भूमिका महत्वपूर्ण रह्यो ।
‘धर्म–फुटबल, भगवान्– म्याराडोना’
चार महिनापछि एउटा सनसनीपूर्ण समाचार बाहिरियो – नेपल्सकी एक युवतीले आफ्नो पेटमा म्याराडोनाको सन्तान रहेको दाबी गरिन् । म्याराडोनाले यस खबरलाई झूटो भने । तर, उनी तनावमा भने थिए । बढ्दो स्टारडमलाई सम्हाल्न उनलाई अफ्टेरो परिरहेको थियो । दबाब कम गर्न अल्कोहल र ड्रग्सको साहारा लिन्थे । म्याराडोनाले १९८४ ताका बार्सिलोनामा छँदै एकपटक ड्रग्स सेवन गरेका थिए । यतिबेला अर्कै ग्रहमा पुुगेजस्तो अनुुभव भएको उनले आत्मकथामा लेखेका छन् । यद्यपी, ड्रग्सको अम्मली बनेको नापोली आएपछि नै हो । यसमा स्थानीय माफिया कार्मियो जुलियानोको भूमिका ठूलो थियो । कार्मियो र सम्पूर्ण जुलियानोज परिवार म्याराडोनासँग निकट भइसकेको थियो । म्याराडोनाको ख्यातिको फाइदा उठाएर उनीहरु कहिलेकाँही म्याराडोनाकै गाडीमा ड्रग्स बोकेर लैजान्थे, नेपल्समा उक्त गाडीको चेकजाँच हुँदैन थियो ।
मैदानबाहिरका म्याराडोनाका विवादहरुलाई मैदानभित्रको उनको खेल–कौशलले जितेको थियो । ठूला क्लबहरुको वर्चश्व तोड्दै १९८७ मा म्याराडोनाले नापोलीलाई इतिहासकै पहिलो सिरिए उपाधि जिताए । यस खुसीको उपलक्ष्यमा नेपल्समा पाँचदिनसम्म पार्टी चल्यो,समर्थकहरुले उनलाई भगवान् नै मान्न थाले । कतिपय समर्थकले आफ्नो घरमा जिसस क्राइस्टको फोटोसँगै म्याराडोनाको फोटो झुन्ड्याएका हुन्थे । एकपटक, परीक्षणका क्रममा निकालिएको उनको रगतको नमूनालाई एक नर्सले चर्चमा लगेर चढाएकी थिइन् । ड्रग्सले म्याराडोनाको व्यक्तित्व सखाप पार्न लागेको हेक्का उनीहरुलाई थिएन ।
पत्रपत्रिकामा पनि म्याराडोनाका अध्याँरा पक्षले भरसक कम ठाउँ पाउथे । ‘जनताको मानसिकतामा म्याराडोना भगवान् भइसकेका थिए । अब भन्नुस्, भगवान्को विरोध गर्ने साहस कसले गर्ने ?’ नापोलीबाट म्याराडोनासँगै खेलेका सिरो फेरेराले भनेका छन् । म्याराडोनाले १९८९ मा पनि नापोलीलाई लिग उपाधि जिताए ।
१९९० को विश्वकपमा म्याराडोनाले पेनाल्टी सुुटआउटमा गोल गरेपछि इटली सेमिफाइनलमा पराजित भयो, नेपल्स रंगशालामै । यतिबेलासम्म म्याराडोना नेपल्समा हार्दैनन् भन्ने छाप समर्थकहरुमा बसिसकेको थियो, उनका केही अन्धभक्त समर्थकहरुले आफ्नै देशविरुद्धको खेलमा पनि अर्जेन्टिनाकै पक्षमा हुटिङ गरिरहेका थिए । यो हारले विश्वकप जित्ने इटलीको सपना तुुहियो । नेपल्स छाडेर इटलीका अन्य शहरवासीहरुलाई लागिसकेको थियो–‘ अब अति होइन, खति नै भइसक्यो । इटलीको प्रेस म्याराडोनामाथि एकोहोरो रुपमा खनिन थाल्यो ।
म्याराडोनाका एकपछि अर्का स्क्यान्डल लगातार बाहिर आए । रातभर यौनकर्मीसँग बसेको, नियमित प्रशिक्षणमा नगरेको, माफियासँग साँठगाँठ गरेको, कर छलेकोलगायत विषयले इटलीका अखबार भरिन थाले । म्याराडोना आजित भइसकेका थिए । उनी कहिले विपक्षी खेलाडी तथा कहिले रेफ्रीसँग विवादमा उत्रन्थे । कहिलेकाँही ड्रग्सको नसामै खेल्न आउथे ।
१९९० को क्रिसमसताका सार्वजनिक भएको एउटा अडियो टेपमा म्याराडोनाले ड्रग्स कारोबारीसँग गरेको कुराकानी रेकर्ड छ । यी र यस्तै प्रमाणहरुलाई आधार बनाएर नेपल्सस्थित अदालतले म्याराडोनाविरुद्ध अनुसन्धान थाल्यो । उनीविरुद्ध लागू पदार्थको प्रयोग र दुुर्व्यसनबारेको मुद्दा चल्यो । अदालतले फेबु्रअरी १९९१ मा १ वर्ष २ महिनाको जेल सजाय (सस्पेन्डेड अर्थात् जेल जानुु नपर्ने) र ५ मिलियन लिरा जरिवाना सुनायो । यस घटनाको केही समयपछि नापोली र बारीबीचको खेलमा म्याराडोना मैदानमा देखिए, तर डोपिङ परीक्षणमा उनी असफल भए । यसपछि म्याराडोनामाथि नापोलीले १५ महिनासम्म प्रतिबन्ध लगायो, उनी त्यही रात सामान प्याक गरेर अर्जेन्टिना हिँडे ।
त्यहाँ पनि ड्रग्सको लतले छाडेन, दुुई सातापछि ब्युुनोर्स आयर्समा उनी आधा किलो कोकिनसहित पक्राउ परे । १५ महिनाको प्रतिबन्ध फुुकुवापछि म्याराडोनाले एक सिजन स्पेनको सेभियाबाट खेले । त्यसपछि, अर्जेन्टिनाको निवेल वल्ड ब्वाईजमा आबद्ध भए । १९९४ को विश्वकपमा ग्रिसविरुद्ध गोल गरेर म्याराडोना फेरि चर्चामा तानिएका थिए, तर डोपिङ परीक्षणमा असफल भएपछि उनको गोल छायामा प¥यो । उनीमाथि यसपटक फिफाले १५ महिने प्रतिबन्ध लगायो ।
प्रतिबन्ध फुुकुवापछि म्याराडोनाले बोका जुनियर्समा दुुई सिजन बिताए, तर पहिलेजस्तो जादुु देखाउन सकेनन् । उनले १९९७ मा सन्यास लिए ।
ड्रग्स र अल्कोहलका कारण सन् २००० तिर आइपुुग्दा उनको स्वास्थ अति खराब भइसकेको थियो । उरुग्वेको एक अस्पतालमा चेकजाँच गर्दा मुटुले ३८ प्रतिशतमात्रै काम गरेको रिपोर्ट आयो । यतिबेला अर्जेन्टिनाका अधिकांश अस्पताल उनको उपचार गर्न तयार थिएनन्, म्याराडोनाको मृत्युुको दोष आफ्नो टाउकोमा लिन उनीहरु चाहँदैन थिए ।
यही समय क्युवाका कम्युनिष्ट नेता तथा तत्कालीन राष्ट्रपति फिडेल क्यास्ट्रोले म्याराडोनालाई उपचारका लागि आमन्त्रण गरे । ‘चे ग्वेभाराजस्तै म पनि विद्रोही हुँ । मलाई क्युवेली उपचार प्रणालीमा विश्वास छ,’ हभाना विमानस्थल पुुगेपछि म्याराडोनाले भनेका थिए ।
फिडेलले म्याराडोनाको सम्पूर्ण उपचार खर्च क्युवाले नै व्यहोर्ने घोषणा गरेका थिए । म्याराडोनालाई सुधारगृह लगिएको थियो, जहाँ उनलाई भेट्न फिडेल आफैं जान्थे । यसक्रममा दुुईबीच घनिष्ट सम्बन्ध विकास भयो । म्याराडोनाको दाहिने पाखुरामा चे ग्वेभारा र देब्रे खुुट्टामा फिडेल क्यास्ट्रोको ट्याटुु खोपाएका थिए ।
२००५ को अगस्टसम्म आइपुुग्दा म्याराडोना ड्रग्सबाट टाढा भइसकेका थिए । उनले यसपछि केही समय अर्जेन्टिनाको एक टेलिभिजनमार्फत ‘नम्बर १० सँग एक रात’ नामक कार्यक्रम सञ्चालन गरे, यस कार्यक्रममा फिडेललाई पनि अतिथी बनाएर बोलाएका थिए । मेइ २००७ सम्म आइपुुग्दा अल्कोहल पनि छाडिसकेको म्याराडोनाको दाबी थियो ।
स्वास्थ लाभपछि म्याराडोनाले २०१० को विश्वकपमा अर्जेन्टिनी टोलीको प्रशिक्षण पनि सम्हाले । यद्यपी, पछिल्ला केही वर्ष उनले फेरि मदिरा पिउन सुरु गरे । २०१८ को विश्वकपमा अर्जेन्टिना र नाइजेरिया भिड्दै गर्दा दर्शकदीर्घामा बसेर म्याराडोनाले बियर पिएको देखिन्थ्यो । ३० अक्टुुबरमा आफ्नो ६० औं जन्मदिन मनाएपछि म्याराडोना अस्पताल भर्ना भएका थिए । त्यहाँ उनको मष्तिष्कको सफल शल्यक्रिया गरिएको थियो । म्याराडोनाले अल्कोहल छाड्नुुको विकल्प नरहेको र त्यसका लागि संघर्ष गरिरहेको चिकित्सकको भनाइ थियो ।
२५ नोभेम्बर २०१६ मा फिडेल क्यास्ट्रोको निधन हुँदा म्याराडोना निकै स्तब्ध थिए । ‘फिडेलसँगको भेट मेरा लागि आकाश छोए बराबर थियो । म जीवित हुनुको एउटा कारण भगवान् र अर्को उनी हुन्,’ म्याराडोनाले भनेका थिए ।
संयोग पनि कस्तो भने त्यसको ठीक ४ वर्षपछि अर्थात २५ नोभेम्बर २०२० मा हृदयघातका कारण म्याराडोनाको निधन भएको छ । अलविदा म्याराडोना !